देउवालाई प्रश्न : ४ पटक प्रम हुँदा मतलब नगर्ने, अहिले चर्को रुपमा उठाउने ? « Pathibhar Online
देउवालाई प्रश्न : ४ पटक प्रम हुँदा मतलब नगर्ने, अहिले चर्को रुपमा उठाउने ?
कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापती तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवालाई सञ्चारकर्मीले चार पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा मतलब नगर्ने, अहिले चर्को रुपमा कालापानी बिबा द उठाउने ? भन्ने प्रश्नको गर्नुभएको छ ।
नेपाल प्रेस यूनियन कञ्चनपुरले शनिवार बिहान सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवालाई सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नको जवाफमा देउवाले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “मैले भनेकै हो । आज पनि भन्दैछु । कूटनीतिक पहल गरेको छ । सन्धीमा लेखेको आधा पानी भनेको के हो ?” उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अति क्रमित भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेको पनि दाबी गर्नुभयो ।
भारतसँग भएको महाकाली सन्धिमा पनि महाकाली नदीको उद्गमस्थल पूर्वको भूमिलाई नेपाली भूभागका रुपमा व्याख्या गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । कालापानी नेपालको भूभाग भएको दोहोर्याउँदै महाकाली नेपाल–भारतको सीमा नदी भएको जि किर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले महाकाली सन्धी गरेका बेला महाकाली सीमा नदी भनिएको छ । पानी पनि आधा आधा हक लाग्छ भनेर सिद्धान्त तहैमा पास भएको हो । लिखित नै छ त्यहाँ । सीमा नदी भएकाले उद्गम स्थलबाटै पूर्व नेपाली भूमि हो ।”
सभापति देउबाले वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारलाई छिमेकी मुलुक भारले सीमा अति क्रमणको विषमा मुखदर्शक भएर बसेको आरो प लगाउनुभयो । सीमा सम्बन्धी बिबादमा राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिबा द समाधानका लागि मतलब नै नगरेको भन्दै आक्रो श ब्यक्त गर्नुभयो ।
झापामा आज थप ४ जनामा कोरोना पुष्टि, उनिहरु कहाँका हुन् ?
दमक १ साउन । झापामा आज थप ४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।मेचीनगरमा १
सरकारले गच्छेअनुसार माग पूरा गर्छ, ढुक्क हुनोस् – ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको क्षमता र गच्छेअनुसार यातायात व्यवसायी एवं यस क्षेत्रका
नेकपा कुनैपनि बेला फुट्ने खतरा
काठमाडौं– पार्टी विवाद र सरकार सञ्चालनका विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला नेकपाका दोस्रो
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अर्का अध्यक्ष
प्रचण्डले ओलीसमक्ष राखेको त्यो प्रस्ताव – पार्टीभित्रै तरंग यी हुन्…
साउन १ गतेदेखि निजी स्कूल सधैंका लागि बन्द